Oovimba be-BNBUSD-Funda ukuRhweba
I-Binance Coin (BNBUSD) Ixabiso lijolise kwiNqanaba lokumelana ne-599 yeedola
Uqikelelo loNyaka lweNgqekembe yeBinance (2022)
Ukungakwazi ukuphula inqanaba lenkxaso ye-430 yeebhere, i-BNBUSD inokuqhekeza i-$ 503 kunye ne-bullish trend inokuqala kumanqanaba okumelana ne-$ 599, kunye ne-$ 678. Ukunyuka okungaphezulu kwisantya sabathengisi kuya kutyhala i-Binance Coin ukuba iphule inqanaba lenkxaso ye-430 yeedola kwaye ukuba ikhandlela lemihla ngemihla linamathele ngaphantsi kwayo, ngoko ke, ixabiso linganciphisa ngakumbi ukuvavanya i-$ 364 kunye ne-$ 254 amanqanaba enkxaso.
Amanqanaba okumelana: $ 503, $ 599, $ 678
Amanqanaba enkxaso: $ 430, $ 364, $ 254
I-Binance coin i-bearish kwitshathi yeveki. I-crypto yayikwizinga eliphantsi ngaphantsi kwe-$ 430 ekuqaleni konyaka odlulileyo. Iinkunzi zenkomo zafumana amandla kwinyanga kaFebruwari ngokuqulunqwa kwamakhandlela e-bullish. Uxinzelelo lwe-bullish lutyhalele ixabiso kwi-678 yezinga lokumelana nenyanga kaMeyi. Inqanaba elikhankanyiweyo lixhathise ukunyuka kwamaxabiso okungaphezulu. Kwavela amakhandlela e-bearish eqinile ngeveki kwaye ixabiso lehla ukuya kwizinga le-$ 254. Ukuphakama kwangaphambili kwaphinda kwavavanywa ngoNovemba xa iinkunzi zeenkomo zenza uxinzelelo olungakumbi. Ipateni yekhandlela lenkwenkwezi yangokuhlwa yaveliswa kwaye ixabiso liyancipha ukuya kwinqanaba eliphantsi langaphambili.
Itshathi yeVeki ye-BNBUSD, nge-14 kaJanuwari
I-Binance Coin ingene kumyinge ohamba ngokukhawuleza kunye nomyinge ohamba kancinci osezantsi. Ingqekembe irhweba ngaphantsi kwamaxesha ali-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA kumgama abonisa ukuba umfutho weebhere ukhula ngokuthe ngcembe kwimalike yengqekembe yeBinance. Ixesha le-Relative Strength Index 14 likumanqanaba angama-50 kunye nemigca yesignali ekhombe phezulu ukubonisa uphawu lokuthenga. Ukungakwazi ukuphula inqanaba lenkxaso ye-430 yeebhere, i-BNBUSD inokuqhekeza i-$ 503 kunye ne-bullish trend inokuqala kumanqanaba okumelana ne-$ 599, kunye ne-$ 678. Ukunyuka okungaphezulu kwisantya sabathengisi kuya kutyhala i-Binance Coin ukuba iphule inqanaba lenkxaso ye-430 yeedola kwaye ukuba ikhandlela lemihla ngemihla linamathele ngaphantsi kwayo, ngoko ke, ixabiso linganciphisa ngakumbi ukuvavanya i-$ 364 kunye ne-$ 254 amanqanaba enkxaso.
I-BNBUSD ikwitshathi yeeyure ezi-4. Ixabiso livavanye izinga lokumelana ne-$ 678 kabini emva kokunyuka kwexabiso ukusuka kwinqanaba lenkxaso ye-364 yeedola. Le meko yenzeke phakathi kweyoMdumba kunye noMeyi kulo nyaka uphelileyo. Iinkunzi zeenkomo zikufumanisa kunzima ukuphula inqanaba lokumelana ne-678 yeedola. Umfutho weBearish unyukile kwaye ixabiso liyancipha ukuya kwinqanaba le-430 yeedola.
Itshati yemihla ngemihla ye-BNBUSD, nge-14 kaJanuwari
I-Binance coin ithengisa ngaphantsi kwe-9 amaxesha e-EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA abonisa ukunyuka kwesantya seebhere. Ngaphantsi kwangaphambili kwe-254 yeedola inokuvavanywa.
I-Binance Coin (i-BNBUSD) Ixabiso lisondela kwiNqanaba eliBullish eliBullish eliBuyisayo
Uhlalutyo lwamaxabiso e-BNBUSD-nge-07 kaJanuwari
Ukunyuka okungaphezulu kwisantya sabathengisi kuya kutyhala i-Binance Coin ukuphula inqanaba lenkxaso ye-430 yeedola kwaye ukuba ikhandlela lemihla ngemihla livale ngaphantsi kwayo, ngoko, ixabiso linganciphisa ngakumbi ukuvavanya amanqanaba enkxaso ye-364 yeedola.
Amanqanaba okumelana: $ 503, $ 540, $ 599
Amanqanaba enkxaso: $ 430, $ 364, $ 311
I-Binance coin i-bearish kwitshathi yemihla ngemihla. I-crypto yayirhweba phakathi kwezinga lokumelana ne-$ 540 kunye nenqanaba lenkxaso ye-$ 503 kwiveki ephelileyo. Ingqekembe iye yavavanya inqanaba lokumelana ne-540 yeedola kabini ezibonisa umqondiso weebhere ukuba zilawule imarike yemali ye-Binance. Ngomhla we-05 kaJanuwari, iibhere zanqoba phezu kweenkunzi zeenkomo kunye nokwakhiwa kwekhandlela elinamandla eliqhekezayo eliqhekeza inqanaba lenkxaso ye-503 yeedola, ixabiso liyancipha ukuya kwinqanaba lexabiso le-$ 430.
Itshati yemihla ngemihla ye-BNBUSD, nge-07 kaJanuwari
I-Binance Coin ingene kumyinge ohamba ngokukhawuleza kunye nomyinge ohamba kancinci osezantsi. Ingqekembe irhweba ngaphantsi kwamaxesha ali-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA kumgama abonisa ukuba umfutho weebhere ukhula ngokuthe ngcembe kwimarike yengqekembe yeBinance. Ixesha le-Relative Strength Index 14 likumanqanaba angama-20 kunye nemigca yesignali ekhombe phantsi ukuze ibonise uphawu lokuthengisa. Ukunyuka okungaphezulu kwisantya sabathengisi kuya kutyhala i-Binance Coin ukuphula inqanaba lenkxaso ye-430 yeedola kwaye ukuba ikhandlela lemihla ngemihla livale ngaphantsi kwayo, ngoko, ixabiso linganciphisa ngakumbi ukuvavanya amanqanaba enkxaso ye-364 yeedola. Ukungakwazi ukuphula inqanaba lenkxaso ye-430 yeebhere, i-BNBUSD iya kuqhekeza i-$ 503 kunye ne-bullish trend inokuqala kumanqanaba okumelana ne-$ 540, kunye ne-$ 599.
I-BNBUSD ikwitshathi yeeyure ezi-4. Ixabiso laliphakathi kwe-$ 540 kunye namanqanaba e-$ 503 kwiveki ephelileyo. Ixabiso liphule inqanaba lokumelana ne-$ 540 ngoDisemba 27. Abathengisi banqatshelwe ukunyuka kwexabiso kwaye baphule inqanaba lenkxaso ye-$ 503 ngoJanuwari 05. Ixabiso libhekiselele kwinqanaba lenkxaso ye-430 yeedola.
Itshathi ye-BNBUSD yeeyure ezi-4, nge-07 kaJanuwari
Ingqekembe yeBinance ithengisa ngaphantsi kwamaxesha ali-9 e-EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA abonisa ukwanda kwamandla ebhere.
I-Binance Coin (BNBUSD) Ixabiso linokuthi lifikelele kwi-$ 678 ebonelelwe nge-$ 599 yeNqanaba ayiBambi.
Uhlalutyo lwamaxabiso e-BNBUSD-Disemba 24
Ixabiso linokunyuka ukuya kwi-$ 678 kunye ne-$ 758 amanqanaba okumelana nokubonelela ngenqanaba lokumelana ne-$ 599 ayibambeli. Kwimeko apho inqanaba elisele likhankanyiwe libambe, ixabiso le-BNB linokuncipha ukuya kumanqanaba enkxaso kwi-540 yeedola, i-$ 503, kunye ne-$ 430.
Amanqanaba okubonelela: $ 599, $ 678, $ 758
Amanqanaba emfuno: $ 540, $ 503, $ 430
Kwitshathi yemihla ngemihla, i-BNBUSD i-bearish. Imarike ye-BNB ifumana ukuwa okukhulu emva kokuqulunqwa kwepateni yetshathi ephindwe kabini. Inqanaba lenkxaso yangaphambili ye-$ 599 yangena kwaye yajika kwinqanaba lokumelana. Inqanaba lenkxaso ye-$ 503 yavavanywa kwaye ixabiso lidibanisa iintsuku ezininzi ngaphambi kokuba iinkunzi zenkomo zifumane umfutho. Uxinzelelo lweenkunzi zeenkomo lukhula ngokuthe ngcembe kwaye ixabiso linyuka ngaphezu kwe-$ 540 kwinqanaba.
Itshati yemihla ngemihla ye-BNBUSD, nge-24 kaDisemba
I-crypto ibonakala ikhula njengoko amakhandlela amaninzi akhulayo avela ngaphezu kwenqanaba lenkxaso ye-540 yeedola. Ixabiso lirhweba ngaphezu kwe-9 ixesha lokuhamba kwe-Average kodwa ngaphantsi kwe-21 I-avareji ehambayo kuqhagamshelwano olusondeleyo ukubonisa ukuhamba kwe-bullish. Ixabiso linokunyuka ukuya kwi-$ 678 kunye ne-$ 758 amanqanaba okumelana nokubonelela ngenqanaba lokumelana ne-$ 599 ayibambeli. Kwimeko apho inqanaba elisele likhankanyiwe libambe, ixabiso le-BNB linokuncipha ukuya kumanqanaba enkxaso kwi-540 yeedola, i-$ 503, kunye ne-$ 430.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-BNBUSD ikwi-bullish. I-bearish momentum iye yanciphisa ixabiso kwinqanaba lenkxaso ye-503 yeedola. Ikhandlela eligubungele i-bullish lenziwe elabangela intshukumo ye-bullish. Ixabiso liphula inqanaba lokumelana ne-540 yeedola. Ivezwa kwinqanaba lokumelana ne-599 yeedola.
Itshathi ye-BNBUSD yeeyure ezi-4, ngoDisemba 24
Ixabiso liwele i-EMA ezimbini phezulu kwaye ixabiso lirhweba ngaphezulu kwamaxesha angama-9 e-EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA. I-Relative Strength Index ixesha le-14 kwinqanaba le-60 kunye nomgca wesignali okhomba phezulu obonisa ukuba ixabiso linokufumana ukunyakaza okuqhubekayo.
I-Binance Coin (BNBUSD) Ixabiso: I-Bullish Breakout kwiNqanaba le-599 ye-May Drive Ixabiso ukuya kwi-$ 678
Uhlalutyo lwamaxabiso e-BNBUSD-Disemba 10
Ukuba iinkunzi zeenkomo zikhusela inqanaba lenkxaso ye-540 yeedola, ixabiso linokuthi liphume kwizinga le-$ 599, liqhubeke nentshukumo yalo ye-uptrend ukuya kwinqanaba lokumelana ne-$ 678 kunye ne-$ 758. Ngakolunye uhlangothi, uxinzelelo olungakumbi oluvela kubathengisi lunokuthi lutyhale i-Binance Coin ukuphula inqanaba lenkxaso ye-540 yeedola ezinokuthi zehle ngakumbi ukuya kwi-$ 503 kunye ne-$ 430 amanqanaba.
Amanqanaba okumelana: $ 599, $ 678, $ 758
Amanqanaba enkxaso: $ 540, $ 503, $ 430
I-BNBUSD yexesha elide: Ukutshintsha
Ingqekembe yeBinance isendleleni yokuhamba kwitshathi yemihla ngemihla. Iinkunzi zenkomo zibangele intshukumo ye-bullish xa intshukumo ye-bearish yaliwa kwinqanaba lokuxhasa lama- $ 540. Ukunyuka kwamaxabiso kwinqanaba lokumelana ne- $ 678 kwaye yayichaswa ngokulinganayo ziibhere. Ingqekembe iqala ngokuhamba okuphakathi kwinqanaba lokumelana ne- $ 599 kunye nenqanaba lenkxaso le- $ 540.
Itshathi yemihla ngemihla ye-BNBUSD, ngo-Disemba 10
I-Binance Coin ithengisa phakathi nangaphantsi kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA. Ixesha elinamandla eliNxulumene naMandla eli-14 lithe tyaba kumanqanaba angama-40 ngemigca yomqondiso engabonisi lathiso. Ukuba iinkunzi zeenkomo zikhusela inqanaba lenkxaso le- $ 540, ixabiso linokuphuma kwinqanaba le- $ 599, liqhubeke nokunyuka kwayo ukuya kwinqanaba lokumelana ne- $ 678 kunye ne- $ 758. Kwelinye icala, uxinzelelo ngakumbi kubathengisi lunokutyhala phantsi i-Binance Coin yokwaphula inqanaba lenkxaso le-540 yeedola enokuthi yehle iye kufikelela kumanqanaba angama-503 nama-430 eedola.
I-BNBUSD yexesha eliphakathi iTrend: Ukutshintsha
I-BNBUSD isukela kwitshathi yeeyure ezi-4. Kubonakala ngathi umfutho weebhere kunye neenkunzi zeenkomo zikulungelelwaniso emva kokutsalwa kweBinance Coin kwinqanaba lokuxhasa lama- $ 540. Ibetha inqanaba le- $ 599 kwaye ibuye umva. Iinkunzi ziphulukana namandla azo kwaye ixabiso alinakonyuka ngakumbi. Kwakhona, iibhere ziphulukana namandla kwaye oku kwazisa ukungazinzi okuphantsi kunye nesantya esiphantsi kwimarike yemali yeBinance.
Itshathi ye-BNBUSD yeeyure ezi-4, ngoDisemba 10
Ingqekembe yeBinance ijikeleza ngaphezulu kwamaxesha ali-9 i-EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA njengophawu lwentengiso ehlukahlukeneyo. Isalathiso samandla ahambelanayo ixesha le-14 likumanqanaba e-50 kwaye umgca wesignali awubonisi ulwalathiso oluthile.
I-Binance Coin (BNBUSD) Ixabiso: Ngaba i-Bullish Momentum inokuqhawula iNqanaba le-678 yeedola?
Uhlalutyo lwamaxabiso e-BNBUSD-Disemba 03
Kwimeko apho umgangatho wokuchasana we-678 yeedola ungenwe phezulu, ixabiso linganyuka liye kwi-758 yeedola ezinokufikelela kwi-850 yeedola. Ukuba inqanaba lokumelana ne-$ 678 likhuselwe ngamabhere, ixabiso linokuthi libuyisele umva kwaye liqhubeke nentshukumo ye-bearish ukuya kumanqanaba enkxaso ye-$ 599, i-$ 540 kunye ne-$ 503.
Amanqanaba okubonelela: $ 678, $ 758, $ 850
Amanqanaba emfuno: $ 599, $ 540, $ 503
Kwimbonakalo yexesha elide, i-BNBUSD ikwimeko entle. Ingqekembe yawela kwinqanaba lenkxaso ye-540 yeedola emva kokuqulunqwa kwephethini yetshathi ephindwe kabini. Isantya se-bearish siphazanyiswa yinkunzi yenkomo ngokuqulunqwa kwekhandlela eligubungele i-bullish kwinqanaba lenkxaso ye-540 yeedola. I-Binance Coin iyanda ngeli xesha kwaye inqanaba le-$ 599 liye langena phezulu. Kwiveki ephelileyo ixabiso lexabiso liphantsi kwaye ixabiso lihlala ngaphakathi kwe-$ 678 kunye namanqanaba e-$ 599.
Itshati yemihla ngemihla ye-BNBUSD, nge-03 kaDisemba
I-Binance Coin ithengisa ngaphezu kwee-EMA ezimbini kumgama osondeleyo obonisa ukuba ukunyuka kwe-bullish kuphantsi kwimarike ye-Binance. I-EMA ehamba ngokukhawuleza (amaxesha ali-9) iwele i-EMA ecothayo (amaxesha angama-21) phezulu. Kwimeko apho umgangatho wokuchasana we-678 yeedola ungenwe phezulu, ixabiso linganyuka liye kwi-758 yeedola ezinokufikelela kwi-850 yeedola. Ukuba inqanaba lokumelana ne-$ 678 likhuselwe ngamabhere, ixabiso linokuthi libuyisele umva kwaye liqhubeke nentshukumo ye-bearish ukuya kumanqanaba enkxaso ye-$ 599, i-$ 540 kunye ne-$ 503.
Ingqekembe yeBinance ikwintshukumo ye-bullish kwitshathi yeyure ezi-4. Imarike yeBinance yafumana i-bearish momentum xa kukho i-double top chart chart kwinqanaba lokumelana ne-$ 678. Intshukumo ye-downtrend ayikwazanga ukuqhubeka njengoko uxinzelelo lweebhere luhlulekile kwinqanaba lexabiso le-540 yeedola. Ikhandlela le-Bullish eligubungeleyo lenziwe kwaye ixabiso liyenyuka ukuya kwinqanaba lokumelana ne-678 yeedola.
I-BNBUSD 4 itshathi yeeyure, ngoDisemba 03
I-Binance Coin ithengisa malunga namaxesha angama-9 e-EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA abonisa ukuba ukukhawuleza kwabathengi kuphantsi kwimarike ye-Binance.
I-Binance Coin (i-BNBUSD) Ixabiso: Iinkunzi eziphazamisa iibhere kwi-540 yeedola
Uhlalutyo lwamaxabiso e-BNBUSD-Novemba 26
Ukuba umgangatho wokuchasana we-678 yeedola uphukile phezulu, ixabiso linokwenyuka ukuya kwi-758 yeedola ezinokufikelela kwi-850 yeedola. Kwimeko apho izinga lokuchasana le-$ 678 libamba, ixabiso linokuthi libuyisele umva kwaye liqalise i-bearish movement ukuya kumanqanaba enkxaso ye-$ 599, i-$ 540 kunye ne-$ 503.
Kwimbonakalo yexesha elide, i-BNBUSD ikwimeko entle. Ukuqulunqwa kwephethini ye-double top chart kwakhokelela ekuweni kwexabiso leBinance ukuya kwinqanaba le-$ 540. Ikhandlela eligubungele i-bullish lavela ukuphazamisa iibhere kwinqanaba lenkxaso ye-540 yeedola. I-Binance Coin iyanda ngeli xesha kwaye izinga le-$ 599 liye langena phezulu. Ukunyuka okungaphezulu kwixabiso leBinance kubeke ixabiso ngaphezu kwenqanaba lokumelana ne-$ 599 kwaye lijolise kwinqanaba lokumelana ne-$ 678.
Itshati yemihla ngemihla ye-BNBUSD, nge-26 kaNovemba
I-Binance Coin ithengisa ngaphezu kwee-EMA ezimbini kumgama obonisa ukuba ukunyuka kwe-bullish kuyanda kwimarike yeBinance. I-EMA ehamba ngokukhawuleza (amaxesha ali-9) izama ukuwela i-EMA ehamba kancinci (amaxesha angama-21) phezulu. Ukuba umgangatho wokuchasana we-678 yeedola uphukile phezulu, ixabiso linokwenyuka ukuya kwi-758 yeedola ezinokufikelela kwi-850 yeedola. Kwimeko apho izinga lokuchasana le-$ 678 libamba, ixabiso linokuthi libuyisele umva kwaye liqalise i-bearish movement ukuya kumanqanaba enkxaso ye-$ 599, i-$ 540 kunye ne-$ 503.
Ingqekembe yeBinance ikwintshukumo ye-bullish kwitshathi yeyure ezi-4. Iibhere zazilawula imarike yeBinance kwiveki ephelileyo emva kokubunjwa kwephethini yetshathi ephindwe kabini. Yanciphisa kwinqanaba lenkxaso ye-599 yeedola kwaye yandiswa ukuya kwinqanaba lenkxaso ye-$ 540. Kwakukho ukuphazamiseka kwiinkunzi zenkomo kunye nokwakheka kwekhandlela eligubungela i-bullish. Ixabiso lihambela phezulu kwi-678 yeedola okwangoku.
Itshathi ye-BNBUSD yeeyure ezi-4, ngo-Novemba 26
I-Binance Coin ithengisa ngaphezu kwexesha le-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA abonisa ukuba abathengi balawula i-market ye-Binance.
tags IBNBUSD, imarike, Marketing, Uhlalutyo Technical
I-Binance Coin (BNBUSD) Ixabiso: Ipateni yeTshati ephindwe kabini, iibhere zilawula
Uhlalutyo lwamaxabiso e-BNBUSD-Novemba 19
Kwimeko apho inqanaba lenkxaso ye-503 yeedola lingene, ixabiso linganciphisa kwi-$ 430 elinokwandisa kwi-$ 364. Ukuba inqanaba lenkxaso ye-503 yeedola libamba, ixabiso linokuthi lihlehlise kwaye libhekane namanqanaba okumelana ne-$ 540, i-$ 599 kunye ne-$ 678.
Kwimbonakalo yexesha elide, i-BNBUSD ibhebhile. I-Binance Coin yenze i-double top chart pattern kwixesha lemihla ngemihla kwinqanaba lokumelana ne-$ 678. I-touch yokuqala yayiyi-08 kaNovemba, ikhuphe umva ukuvavanya inqanaba lenkxaso ye-$ 599. Umnxeba wesibini wawungoNovemba 11, izinga lokumelana ne-$ 678 libamba kunye nokwehla kwexabiso. Ixabiso liye langena kumanqanaba enkxaso ye-$ 599 kunye ne-$ 540.
Itshati yemihla ngemihla ye-BNBUSD, nge-19 kaNovemba
I-Binance Coin ithengisa ngaphantsi kwee-EMA ezimbini kumgama obonisa ukuba ukunyuka kwe-bearish kuyanda kwimarike ye-Binance. I-EMA ehamba ngokukhawuleza (amaxesha ali-9) izama ukuwela i-EMA ehamba kancinci (amaxesha angama-21) ezantsi. Kwimeko apho inqanaba lenkxaso ye-503 yeedola lingene, ixabiso linganciphisa kwi-$ 430 elinokwandisa kwi-$ 364. Ukuba inqanaba lenkxaso ye-503 yeedola libamba, ixabiso linokuthi lihlehlise kwaye libhekane namanqanaba okumelana ne-$ 540, i-$ 599 kunye ne-$ 678.
Ingqekembe yeBinance ikwintshukumo ye-bearish kwitshathi yeyure ezi-4. Iibhere zichase ukukhawuleza kwe-bullish kwizinga lokumelana ne-$ 678. Ikhandlela elinamandla le-bearish elenziweyo elibonisa ukuphazamiseka kweebhere. I-Crypto ivavanye inqanaba lokumelana ne-678 yeedola ezimbini ngamaxesha ahlukeneyo. Iinkunzi azikwazanga ukulinyusa ixabiso. Ingqekembe iyancipha ukudiliza amanqanaba enkxaso ye-$ 599 kunye ne-$ 540.
Itshathi ye-BNBUSD yeeyure ezi-4, ngo-Novemba 19
I-Binance Coin ithengisa ngaphantsi kwexesha le-9 le-EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA abonisa ukuba abathengisi balawula imarike.
I-Binance Coin (i-BNBUSD) Ixabiso leNqanaba lokuchasa i-$ 678, i-Bearish Movement inokuthi iqalise
Uhlalutyo lwamaxabiso e-BNBUSD-Novemba 12
Kwimeko apho izinga lokumelana ne-$ 678 libambe ixabiso linokuthi lihlehlise kwaye libhekane namanqanaba enkxaso ye-$ 599, i-$ 503 kunye ne-$ 430. Ukunyuka okungaphezulu koxinzelelo lweenkunzi zenkomo kunokwaphula i-$ 678 kwaye ixabiso linganyuka ukuya kwi-$ 758 kunye ne-$ 828 amazinga.
Amanqanaba okubonelela: $ 678, $ 758, $ 828
Amanqanaba emfuno: $ 599, $ 503, $ 430
Kwimbonakalo yexesha elide, i-BNBUSD ikwimeko entle. NgoSeptemba 28, i-Binance Coin ifumene inkxaso kwinqanaba le-311 yeedola. Ixabiso liguqukele phezulu ukuze liphule i-$ 430 kunye namanqanaba e-$ 503 ngoncedo lwe-bullish eqinile. Isantya se-Bullish siyanda kwaye sandise ukuphula inqanaba langaphambili lokumelana ne-599 yeedola kunye nokunyuka kwexabiso ukuvavanya inqanaba le-$ 678. Ibuyisela umva ukusuka kwiveki ephelileyo kwaye ngoku ivavanya inqanaba lenkxaso ye-599 yeedola.
Itshati yemihla ngemihla ye-BNBUSD, nge-12 kaNovemba
I-EMA ehamba ngokukhawuleza (amaxesha ayi-9) ihlala ingaphezulu kwe-EMA ehamba kancinci (amaxesha angama-21). I-Binance Coin ithengisa ngaphezu kwee-EMA ezimbini ngokuqhagamshelana ngokusondeleyo ezibonisa ukuba ukunyuka kweenkunzi zenkomo kuba buthathaka kwimarike yeBinance. Kwimeko apho izinga lokumelana ne-$ 678 libambe ixabiso linokuthi lihlehlise kwaye libhekane namanqanaba enkxaso ye-$ 599, i-$ 503 kunye ne-$ 430. Ukunyuka okungaphezulu koxinzelelo lweenkunzi zenkomo kunokwaphula i-$ 678 kwaye ixabiso linganyuka ukuya kwi-$ 758 kunye ne-$ 828 amazinga.
Ingqekembe yeBinance ikwintshukumo ye-bearish kwitshathi yeyure ezi-4. I-Crypto ivavanye inqanaba lokumelana ne-$ 675 ngoNovemba 07, iinkunzi zeenkomo azikwazanga ukunyusa ixabiso. Ikhandlela elinamandla le-bearish elenziweyo elibonisa ukuphazamiseka kweebhere. Ingqekembe iyancipha ukuya kwinqanaba lenkxaso ye-572 yeedola. Izama ukwaphula inqanaba le-599 yeedola okwangoku.
I-BNBUSD 4 itshathi yeeyure, ngoNovemba 12
← Entsha izithuba1 2 ... 7 abaDala izithuba →